कसरी ट्विटर खाता सम्बद्ध गर्ने? ➡️ अनुयायी ▷
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 271
सामाजिक सञ्जाल साइबरस्पेस मा सबैभन्दा व्यस्त ठाउँ हो। मानिसहरु यसलाई आफ्नो साथीहरु र परिवार संग सम्पर्क मा रहन को लागी पहुँच। त्यस्तै गरी, यो मनोरन्जन को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूप हो कि अवस्थित छ, विशेष गरी कारण छिटो छिटो गति जसको साथ सामग्री अपडेट गरीन्छ।
यी सञ्जालहरुमा प्रकाशन को प्रसार लगातार र शानदार छ, विशेष गरी ट्विटर मा, जहाँ ट्वीट्स को संख्या दैनिक ५०० मिलियन भन्दा बढी पुग्छ। र कहिलेकाहीँ प्रयोगकर्ताहरु लाई धेरै सामग्रीहरु को लागी आफ्नो सामग्री प्रकाशित गर्न को लागी छ। यी खाताहरु को प्रबंधन को लागी, प्लेटफर्म एक सम्बद्ध उनीहरुलाई एक खण्ड डिजाइन गरीएको छ।
खाता सम्बद्धता एकै समयमा धेरै खाताहरु को प्रबंधन को लागी एक धेरै उपयोगी प्रक्रिया हो। ट्विटर मा यो अनुप्रयोग र वेबसाइट को बीच अलि फरक छ। तल दिईएका निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्:
ट्विटर वेबसाइट को उपयोग गरेर
को उपयोग गरेर तपाइँको खाता मा लग इन गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता र पासवर्ड।
तपाइँको खाता को तल स्क्रोल गर्नुहोस्, इन्टरफेस को बायाँ तिर, जहाँ तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल फोटो पाउनुहुनेछ। यो फोटो तपाइँको नाम र प्रयोगकर्ता नाम संगै हुनेछ।
तपाइँ तीन अण्डाकार देख्नुहुनेछ कि जब थिच्दा तपाइँ दुई विकल्प देखाउनुहुनेछ: "एक अवस्थित खाता जोड्नुहोस् "र" बाहिर लग आउट"प्रयोगकर्ताको नाम संगै।
पहिलो विकल्प पहुँच गर्नुहोस्। एक विन्डो धेरै बक्सहरु संग स्क्रिन को केन्द्रीय भाग तिर प्रदर्शित गरिनेछ। माथिल्लो देखि तल सम्म पहिलो एक मा तपाइँ फोन, ईमेल वा खाता को उपयोगकर्ता नाम राख्नुहुनेछ।
दोस्रो मा तपाइँ खाता को पासवर्ड राख्नुहुनेछ। यो बक्स तल विकल्प उपलब्ध हुनेछ "के तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो?"
ट्विटर एप को उपयोग गरी
तपाइँको प्रयोग गरेर ट्विटर मा लग इन गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड
स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ तिर तपाइँको प्रोफाइल को छवि मा क्लिक गर्नुहोस्, दृश्य मा जहाँ तपाइँ टाइमलाइन पाउनुहुन्छ।
एकचोटि तपाइँ यसलाई थिच्नुहुन्छ, एक मेनु स्क्रिनको बायाँ छेउमा देखा पर्नेछ। पहिलो कुरा तपाइँ देख्नुहुनेछ कि तपाइँको मेनुमा प्रोफाईल फोटो र तल बाट प्रयोगकर्ता नाम। यस को लागी तपाइँ प्लस प्रतीक (+) पाउनुहुनेछ।
खण्ड प्रदर्शन गर्न को लागी पछिल्लो थिच्नुहोस् "लेखा"। जहाँ सम्बद्ध खाताहरु देखा पर्नेछन्। तपाइँ विकल्प "एक अवस्थित खाता जोड्नुहोस्" पाउनुहुनेछ। जब तपाइँ यसलाई थिच्नुहुन्छ, अर्को खण्ड तपाइँ अन्य खाता को डाटा प्रविष्ट गर्न को लागी प्रदर्शित गरिनेछ।
थप रूपमा तपाइँ विकल्प पाउनुहुनेछ "सबै खाताहरु बाट लग आउट गर्नुहोस्।"
तपाइँ उही बक्सहरु नम्बर, ईमेल वा प्रयोगकर्ता नाम राख्न पाउनुहुनेछ। साथै बक्स पासवर्ड प्रविष्ट गर्न को लागी। त्यस्तै गरी, तपाइँ पासवर्ड रिकभरी विकल्प पाउनुहुनेछ।
सामाजिक मिडिया प्रबन्धकहरु को उपयोग।
वेब मा तपाइँ पनी केहि उपकरणहरु छन् कि तपाइँ एकै साथ धेरै खाताहरु को प्रबंधन मा मद्दत पाउनुहुनेछ। यस को लागी तपाइँ Hoosuite, बफर, अरु को बीच मा छ। यसको प्रयोग गर्न को लागी धेरै सरल छ। तपाइँ सबै गर्न को लागी तपाइँको छनौट को आवेदन को लागी तपाइँको खाता सम्बद्ध छ र प्रकाशनहरु को डिजाइन शुरू।
एक पटक प्रकाशनहरु तयार छन्, तपाइँ प्लेटफर्महरू छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ तिनीहरूलाई प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ र त्यसो गर्न को लागी समय तालिका बनाउनुहोस्।
1 ट्विटर वेबसाइट को उपयोग गरेर
2 ट्विटर एप को उपयोग गरी
3 सामाजिक मिडिया प्रबन्धकहरु को उपयोग।